Gacanka Libaaxa: astaamaha, kala duwanaanshaha noolaha iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 15/07/2021 10:00 | Geology
Mid ka mid ah gulufyada leh noolaha ugu badan ee Badda Dhexe ayaa ah god libaax. Waa marin ballaadhan oo xeebtaan ah oo wajahaya xeebta bacaadka ah ee gobollada koonfurta Faransiiska ee Occitania iyo Provence-Alpes-Côte d'Azur. Gulufkan waxaa loo aqoonsan yahay oo kaliya cilmiga dhulka, laakiin maxaa yeelay wuxuu hoy u yahay rubuc ka mid ah dhammaan noocyada laga helo Badda Dhexe.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Gacanka León, astaamahiisa iyo noolaha kala duwan ee ay ku nooshahay.
2 Kala duwanaanshaha kaladuwan ee Gacanka León
3 Hoyga kala duwanaanta kaladuwan ee Gacanka Leon
4 Ilaalinta noocyada
Gacanka León waxaa laga soocaa dhanka bari iyadoo laga soo maro wabiga ay sameysay iskuxirka Wabiga Rhone iyo Badda Dhexe ee udhaxeysa bariga iyo Côte d'Azur. Xadka koonfur-galbeed waa halka ay Pyrenees ku kulmaan Badda Dhexe, Faransiiska iyo Isbaanishka, ayaa laga soocay Costa Brava ee gobolka Catalonia.
Qaaradda qaaradda waxaa loo soo ban dhigay halkan iyada oo ah dhul xeebeed ballaadhan, dhul-xeebeedyaduna si deg deg ah ayey ugu foorartaa dhinaca biyaha moolka dheer ee Mediterranean. Xeebta waxaa lagu gartaa joogitaanka joogtada ah ee hareeraha hareeraha iyo balliyo fara badan. Baakadaha qaarkood, inta badan nuuradda, ayaa xuduud la leh balaadhintan ballaaran ee fidsan.
Dekedda weyn ee gacanka waa Marseille, waxaa ku xiga Toulon. Kalluumeysiga gobolka Khaliijka waxaa ku badan kalluunka kalluumeysiga, oo inta badan hoos u jilaabta, laakiin hadda wuu sii yaraanayaa kalluumeysiga badan. Tani waa aagga caanka ah ee qabow, oo leh dabayl wadata, oo loo yaqaanno woqooyi galbeed dabaysha ama dabaysha qalaad. Wabiyada ugu waaweyn ee qulqulka qulqulka waa Tech (84,3 km), Têt (120 km), Aude (224 km), Orb (145 km), Hérault (160 km), Vidourle (85 km) iyo Rhone (812 km ).
Bay of León ma aha xudduud xudduud wadaag ah oo fudud, laakiin natiijada Oligocene-Miocene Corsican-Sardinia ee wareega saacadda ka hor jeedda Europa Craton. Ballaadhintan waxay dib u cusbooneysiisay qaabdhismeedka qaabdhismeedka adag ee laga dhaxlay isbeddelka Tethys iyo orogeny Pyrenean. Dhaqdhaqaaqa orogenic ee Eocene wuxuu sababay muuqaalka Pyrenees inuu cadaadiyo oo khafiifiyo qolofka oo dhan. Juquraafiyayaashu waxay saadaalinayaan inay jiri doonaan xoogaa yar oo saliidda badda ah oo ku teedsan geeska gacanka.
Kala duwanaanshaha kaladuwan ee Gacanka León
Waxaa xusid mudan kala duwanaanta nidaamkeeda deegaan, iyo kala duwanaanshaha kala duwanaanta noolaha waxay ku tiirsan tahay plankton aad u tiro badan oo ah isha cunnada ee kaluunka iyo cetaceans badan. Hindisaha LIC wuxuu dammaanad qaadayaa ilaalintiisa iyo dabagalkeeduna wuxuu bixiyaa goob aan la barbardhigi karin oo lagu sharraxayo isbeddelada degaannada xasaasiga ah iyo noocyadas.
Mashruuca LIFE + INDEMARES oo ay isku dubariday Hay'ada kala duwanaanshaha ee Wasaaradda Beeraha, Cuntada iyo Deegaanka - oo natiijooyinkeeda lagu dhawaaqay bishii Abriil ee sanadkii hore - waxay xaqiijisay in biyaha hoostooda ee Bay of León ay leeyihiin Badda Dhexe.
Canyon-ka hoostiisa waa dhul badeed oo ay ku jiraan Cap de Creus continental shelf iyo Cap de Creus iyo Lacaze-Duthiers gorgorrada oo ku yaal dusha sare ee qaaradda Faransiiska. Bedka badda wuxuu leeyahay in ka badan 987 kiiloomitir oo laba jibbaaran iyo astaamo u gaar ah deegaanka. Waxaa lagu ilaaliyaa soo-jeedinteeda oo ah Goob ah Muhiimadda Bulshada (SCI). La socodkeeda wuxuu siinayaa qaab aan la qiyaasi karin sharax sharaxaad ka bixitaanka isbeddelka degaannada xasaasiga ah iyo noocyada, oo ay weheliso ilaalinta. Dhaqdhaqaaqyo dhaqameed oo gaar ah maxaa yeelay waa mid ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan badda Mediterranean.
Nidaamka badda hoosteeda mara wuxuu ku yaal cirifka bari ee gebi ahaanba jasiiradda Iberia iyo wuxuu leeyahay qiyaastii 2.200 nooc, taas oo ka dhigan rubuc ka mid ah noocyada lagu duubay badda Mediterranean.
Meelku wuxuu soo bandhigayaa nidaamyo kaladuwan oo kaladuwan oo kuyaala aag yar oo yar: deegaanka deegaanka xeebta, nidaamyada deegaanka iyo jajabka, iyo bulshooyinka biya mareenka, sidaa darteed waxay leedahay heer sare oo kaladuwanaansho. Hantida weyn ee meeshani waa qayb ahaan sababo badan oo looxaanta ah, oo leh heerka kalluunka ee kalluunka ganacsi ahaan aadka u qiimo badan sida kalluunka iyo krill, oo sidoo kale ah isha cunnada u ah kalluun iyo xayawaanno badan.
Hoyga kala duwanaanta kaladuwan ee Gacanka Leon
Madrepora oculata iyo Lophelia pertusa, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo biyaha qabow ee ku nool badweynta Mediterranean, ayaa laga helaa biyo mareenada hoose ee Cap de Creus. Sababtoo ah cadaadiska dhaqdhaqaaqa aadanaha, noocyadan ayaa lagu waayey meelo kale.
Doolfinnada la jeexjeexay iyo nibiriyada jilicsan ayaa caan ku ah aaggan, halkaas oo hoonbarrooyinka dhalada ku jira ayaa sidoo kale lagu arkaa deegaan xeebeedyada caadiga. Dooxadu sidoo kale waa deegaan muhiim u ah shimbiraha muhiimka u ah. Kuwaas waxaa ka mid ah, biyo-mareenka badda meditareeniyaanka ayaa taagan, taas oo lagu arki karo hal maalin illaa 1.200 oo tijaabo ah, iyo sidoo kale hanjabaadda biyaar ee khatarta ah. Xilliga jiilaalka, tern-cagaha-madow waxay ku badan yihiin biyaha wabiga, iyo sidoo kale gulliyadaha Audouin iyo bahallada Atlantic.
Deegaankan kaladuwan iyo jawiga bada ayaa sidoo kale hoy u ah noocyo kale oo xayawaan ah oo leh qaab nololeed aad u kala duwan, sida shaandheeyeyaasha shaandheeyayaasha, kuwa la joojiyo, kuwa wax xumeeya, kuwa wax baaraya iyo ugaarsadayaasha Dhammaantood waxay ka faa'iideystaan ​​wax soo saarka bayoolojiga sare ee biyaha badda Gacanka León.
Noocani hodanka ahi wuxuu jawaab u yahay dhawr arrimood, arrimahaasi waxay u muuqdaan si aan caadi ahayn isla mar ahaantaana aagga badda ee nidaamka webiga galbeed ee Gacanka Libaaxa, iyo qiimaha weyn ee bey'adeedu waxay ka dhigaysaa dhaxal dabiici ah oo Yurub ah.
Haddii aan rabno inaan ilaashanno noocyada ku jira nidaamyadan deegaanka dabiiciga ah, waxaa lagama maarmaan ah in la soo bandhigo sharciyo nidaaminaya tirada howlaha la qaban karo. Mid ka mid ah hababka aqoonta loogu fidiyo dadka waa aqoonta deegaanka. Waad ku mahadsan tahay waxaan u gudbin karnaa dadweynaha qiyamka dhowrista iyo muhiimada nidaamyadan deegaanka ay u leeyihiin dhowritaanka muddada dheer. Hadafka ugu dambeeya waa in la awoodo in la ilaaliyo nidaamka deegaanka iyo in la sii wado soo saarista kheyraadka iyada oo aan loo baahnayn in la xaalufiyo deegaannada dabiiciga ah ee dhammaan noocyada kor ku xusan.
Sidaad aragto, Gacanka Libaaxa wuxuu hodan ku yahay kala duwanaanshaha noolaha, ilaalintiisuna waa muhiim. Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto Gacanka Libaaxa iyo astaamaha uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Gacanka libaaxa
Musiibooyinka dabiiciga ah